Kabary fifampiarahabana eny Iavoloha : andrasana izay tena fijerena ny fiainam-bahoaka amin’izay | NewsMada
Ho taon’ny inona indray ity taona ity? Taon’ny fanadiovana tamin’ny taon-dasa, raha ny nambara herintaona lasa toy izao, ny 9 janoary 2015. Nefa ao anaty fako Antananarivo Renivohitr’i Madagasikara tamin’ny faran’ny taona. Hatramin’izao, mbola tsy afaka izany. Tsy afaka faran’ny lohany, fa sasatry ny miarina sy manombo-javatra?
Amin’izao lanonana fifampiarahaban’ireo filohan’andrimpanjakana miaraka amin’ny solontenan’ny masoivoho vahiny, eny Iavoloha, ny 8 janoary, izao: andrasana izay ho fandaharanasan’ny fitondram-panjakana amin’ity taona ity. Zava-dehibe ny fampiantranoana ny fivoriana an-tampony iraisam-pirenena, Frankôfônia sy Comesa.
Tsy ho latsak’izany ny fampijoroana ireo andrimpanjakana: Antenimierandoholona, ny Fitsarana avo (HCJ)… Eo koa ny fifidianana eny anivon’ny faritra sy ny faritany. Very zo tamin’ny fifidianana loholona teo ireo izay ho olom-boafidy amin’ny faritra sy faritany, fa tsy voasolo tena amin’izany.
Hampisy fitoniana ny fiahiana ny fiainam-bahoaka
Mbola mibahan-toerana ny raharaham-panjakana sy izay hampandeha izany ho marin-toerana? Na mety ho eo ihany tokoa aza ny ho fiantraikany amin’ny fiainam-bahoaka… Ahoana izay tena fandaharanasa sy asa mivaingana miantraika mivantana amin’ny vahoaka ifotony ho amin’ny fihatsaram-piainana amin’izay?
Eo ny tsy fandriampahalemana mampikaikaika ny rehetra. Mampirongatra fitsaram-bahoaka ny tsy fahazoana antoka izany. Tena hifarana amin’izay ve ny delestazy, ary tsy hisy ny fiakaran’ny saran-jiro? Tsy misy fepetra tantsoroka ataon’ny mpitondra ny amin’ny fidangan’ny vidim-piainana amin’ny fahalalahana gaboraraka.
Eo koa ny kere mananontanona indray any atsimo, na ny tondra-drano amin’ny faritra iva aty afovoan-tany… Mby aiza ny famoronana asa? Mila fandaharanasa mazava sy azo tanterahina avy hatrany, ary hiantraika amin’ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Tsy izay ve no tena fahamarinan-toerana sy hampisy fitoniana maharitra?